Hotel Projects International - Armati Hotel Project China
Armati Hotel Project China
NgoMvulo, Februwari 1, 2016 9: 21: 19 AM America / Los_Angeles
Omnye Armati 5 uqalise iprojekthi Ihotele e China, i-Asia, bamkelekile ukuba atyelele kule hotele ukubona kwetephu yethu.
Armati 447 series kwetephu catalouge nceda khangela zilandelayo:
Beka kwindawo yinkulumbuso Changsha, Changsha Vaya International Hotel ubeka yonke umzi kufuneka anikele nje ngaphandle emnyango kwakho. Lo mhlaba features uluhlu olubanzi izibonelelo ukuze ukuhlala bakho amava amnandi. Wasebenzise inkonzo ehotele wakhe egumbini 24-ngeyure, inkonzo igumbi, igumbi usapho, ipaki imoto, izibonelelo iindwendwe abakhubazekileyo. Guestrooms zizifakelwe zonke iinkonzo kuwe imfuneko ukulala kamnandi ebusuku. Kwezinye lamagumbi, iindwendwe Ungafumana umabonwakude, ufikelelo intanethi - LAN (afezekise), amagumbi non ukutshaya, ufikelelo kwi-intanethi - wireless, kwishawa. Kukwandisa ukuhlala iindwendwe, ihotele nezibonelelo zolonwabo ezifana yegalufa (kwisiza), sauna, ukuphulula, spa, ichibi ngaphakathi. abasebenzi Friendly, izibonelelo olukhulu kufutshane konke Changsha kufuneka anikele izizathu ezithathu kakhulu kufuneka uhlale Changsha Vaya International Hotel